Qalabka AC Compressor
Auto AC Compressor Qaybaha
Taageere Koronto oo Baabuur ah
Delphi GM Harrison Compressor xajin Magnetik
Xannuunka magnetic-Clutch ee Sanden Compressor
Delphi Compressor Valve
Sanden Compressor Valve
Valeo Zexel Compressor Valve
Matoorka wax qarxiya
Tamarta Cusub ee AC
Compressor DC Rotary
Isku-dhafka Korontada ee Isku-dhafan
Kala-baxa Korontada Compressor
Sidee loo dammaanad qaaday tayadaada?
Dhammaan alaabtayada si adag ayaa loo tijaabiyey oo la baaraa ka hor intaan la keenin, si loo hubiyo tayada qancin karta macaamiisheena.Intaa waxaa dheer, dammaanad hal sano ah oo la xiriirta alaabada muhiimka ah ayaa la bixiyaa.
Waa maxay shuruudaha lacag bixinta?
T/T, L/C, Western Union, Money Gram, Pay Pal ayaa diyaar ah.Waxaad ka heli kartaa macluumaadka bangigayaga P/I.Caadi ahaan 30% deebaaji marka la xaqiijiyo P/I iyo 70% baaqi ka hor inta aan la rarin.
Sideed u geysaa alaabta?
Waxaan alaabta ku gaarsiin karnaa bad, hawo, si degdeg ah (DHL, TNT, UPS, EMS, iyo FEDEX).Waxaan leenahay soo gudbiye wadashaqeyn noo gaar ah si aan u helno qiimo tartan ah oo aan ku bixin karno waqti gaaban.Hubaal waxaad dooran kartaa wakiilkaaga si ay kuugu habboonaato.
Waa maxay wakhtigaaga dhalmada?
Alaabta waxaa lagu soo diri doonaa 2-5 maalmood gudahood haddii ay kaydka yihiin, qiyaastii 30 maalmood gudahood wax soo saarka ballaaran ka dib dhigashada xisaabta bangiga our.
Waa maxay shuruudaha xidhidhkaagu?
Waxaan siin karnaa macaamiisheena xirmo dhexdhexaad ah ama sanduuq midab leh oo leh calaamad noo gaar ah.
Ma na siin kartaa muunad?
Hubaal, waxaan siin karnaa macaamiisheena muunad si loogu tijaabiyo tayada haddii aan haysano saamiyo.
Waa maxay MOQ kaaga?
Waxay ku xiran tahay alaabta aad u baahan tahay.Waxaan ku iibin karnaa badeecado tiro yar haddii aan haysano kayd nagu filan.
Miyaad samayn kartaa alaabta si waafaqsan shuruudahayaga?
Hubaal, waan kuu samayn karnaa taas.Waxaad noo soo diri kartaa sawiro farsamo ama muunado waana ku hubin karnaa.Waxaan sidoo kale u horumarin karnaa caaryada cusub macaamiisheena sida waafaqsan shuruudaha.
Wixii su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan noogu dhaaf emailkaaga waxaanan kula xiriiri doonnaa 12 saacadood gudahood.
Qolka 803, Dhismaha B3 Cilmi-baarista iyo Horumarinta, Waddada Yangfan 999, Aagga Farsamada Sare, Degmada Yinzhou, Ningbo, 315040, Shiinaha
Soo koobida Dayactirka Atootada AC iyo Caadiga ah...